यो समीक्षा को भाग रूपमा हामी ल्याप्टप राम्रो के सामना गर्न प्रयास गर्नेछ। निर्माता प्राथमिकता दिन राम्रो छ कुन मापदण्ड द्वारा तिनीहरूले उत्पादनहरु चयन गर्नुहोस्। सबैभन्दा उपयुक्त मोबाइल पीसी गाह्रो छैन चयन गर्न निर्देशन यस सामाग्री मा निर्देशनहरू निम्न।
सबै को पहिलो शरीर ध्यान। यो एक मैट समाप्तिको साथ हुनुपर्छ। सतहमा, यी मोबाइल पीसी छैन रूपमा सजिलै देखिने खरोंच र माटो, यो चमकदार छ रूपमा छन्। त्यसैले, यो थप व्यावहारिक समाधान छ। अर्को, तपाईं आवश्यक विस्तार हुनुपर्छ जो किबोर्ड, मा ध्यान गर्न आवश्यक छ। कि, उनको सही छ त्यहाँ अलग संख्यात्मक कीपैड, प्रायजसो निकै कम्प्युटर मा संख्या प्रविष्ट प्रक्रिया सरल जो छन्। खरीद अघि ध्यान पक्का हुन कि अन्तिम तत्व - यो टचप्याड छ। तिनीहरूले सबै एउटै हो, तर निर्माता र मोडेल आधारमा, बायाँ वा दायाँ, वा केन्द्र अलिकति अवस्थित हुन सक्छ।
अब के राम्रो ल्यापटप बाहिर आंकडा, प्रोसेसर को प्रकार आधारमा। जो यो थियो, र यो सम्मान मा सबै भन्दा राम्रो समाधान मिति मात्र एक ब्रान्ड प्रस्तुत छ। यो उत्पादन हो कम्पनी प्रदर्शन र कम बिजुली खपत को एक उच्च स्तरीय छ जो "इंटेल"। यसको मात्र drawback - overpriced। यो निर्माता देखि आधारभूत ज्ञान को CPU «Celeron» मोडेल, «Pentium» र «कोर i3» प्रस्तुत। तिनीहरूले वृद्धि लागत र प्रदर्शन को क्रम मा सूचीबद्ध छन्। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं मात्र बजार को यो भाग मा प्रोसेसर "AMD" सेरी ए तर यो अवस्था विचार गर्न सक्नुहुन्छ, र यसलाई विगतमा एक शक्तिशाली एकीकृत प्रोसेसर ग्राफिक्स छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ। "कोर i5" र «कोर i7», धनी कम्प्युटिङ अनुभव र ठूलो मूल्य सुविधा मा निर्णय - र यो बजार माथि "इंटेल" शासनकालमै। सरल कार्यहरू लागि (, चलचित्र हेर्दै संगीत सुन्ने, इन्टरनेट काम मा) सीपीयू प्रवेश-स्तर पर्याप्त छ। तर थप गम्भीर आवेदन पत्र (खेल, कार्यक्रम, ग्राफिक पैक) को लागि राम्रो चयन गर्न «कोर i5» र «कोर i7» यस्तो कार्यहरू लागि आदर्श अनुकूल छन् जो छ।
कुनै पनि आधुनिक कम्प्युटर सिस्टम को दोस्रो महत्त्वपूर्ण घटक - भिडियो कार्ड। अझै पनि यो मापदण्ड के एक ल्यापटप चयन गर्न राम्रो छ? जवाफ धेरै छ सरल छ - यो ल्यापटप बाह्य ग्राफिक्स त्वरक संग सुसज्जित छ भने यो राम्रो छ। तर यो गम्भीर र माग कार्यहरू लागि साँचो छ। तपाईं प्रविष्टि-स्तर संगीत, चलचित्र र इन्टरनेट लागि ल्यापटप आवश्यक छ भने, यो एकीकृत ग्राफिक्स संग लिन राम्रो छ। यसको लागत कम छ र यो प्राप्त गर्न सजिलो छ।
अर्को, ल्याप्टप तिनीहरूलाई स्थापित स्मृति को राशि लागि राम्रो हो के बाहिर आंकडा। थप गम्भीर समस्याको लागि 8 जीबी प्रयोग गर्न राम्रो छ हुनत राम, 4GB को एक न्यूनतम हुनुपर्छ। यो एक राम्रो मोबाइल पीसी ड्राइव «SSD», हुनुपर्छ -128 जीबी को न्यूनतम आकार पनि छ। यो तपाईं एकदम कम्प्युटर सिस्टम को गति वृद्धि गर्न अनुमति दिन्छ। अलग, एक हार्ड डिस्क ड्राइभ, जो को कार्य पनि सेट - व्यक्तिगत आफ्नो महत्त्वपूर्ण प्रयोगकर्ता डाटा सुरक्षित। उच्च यो छ - राम्रो। न्यूनतम आकार - 320।
अधिक ब्याट्री जीवन, राम्रो। सबैभन्दा यस सन्दर्भमा उन्नत उपकरणहरू 10-12 घण्टा चार्ज बिना उधारो गर्न सक्षम छन्। न्यूनतम उपयोगी यो सूचक सीमा मा - यो 4-6 घण्टा छ। समय छोटो छ भने, मोबाइल पीसी छैन धेरै राम्रो छ, र यो ध्यान लायक छैन।
अब ती जो कम्पनी आज ल्यापटप किन्न राम्रो छ सामना गरौं। उच्च गुणस्तरीय उत्पादन उत्कृष्ट सेवा समर्थन को हो। यस सन्दर्भमा, उत्पादन, एचपी, एसस, सैमसंग र Lg प्रतियोगिता मा। धेरै सेवा केन्द्र कुशलतापूर्वक र निकटतम समय आफ्नो पोर्टेबल कम्प्युटर सम्बन्धित कुनै पनि मुद्दा समाधान हुनेछ। जब ग्यारेन्टी अवधिमा र यो पछि दुवै यो काम गरेको छ। भुक्तानी गर्न हुनेछ - मात्र फरक पूर्व मामला मा, सबै कुरा गर्दा दोस्रो, मुक्त हुनेछ भन्ने छ। हुनत, व्यवहार मा, प्रायजसो यी निर्माता को उपकरणहरू बाहिर कारण मिति कुनै पनि समस्या बिना काम गर्ने।
मोबाइल पीसी छनौट गर्दा, तपाईं यसलाई पूरा गर्न योजना छ जो कार्यहरू देखि सुरु हुनुपर्छ। यो खेल, ग्राफिक्स र कार्यक्रम, को आवश्यकताहरू भने हार्डवेयर बाह्य एडप्टर र शक्तिशाली प्रोसेसर - निकै बढ्छ। तर संगीतको लागि, चलचित्र र इन्टरनेट एकीकृत ग्राफिक्स साथ एउटा प्रविष्टि-स्तर नोटबुक लागि पर्याप्त हुनेछ। यो, सार मा, जवाफ जो ल्याप्टप राम्रो छ। यो आधारित, र तपाईँले एक उपकरण चयन गर्न आवश्यक छ।
कम्प्युटर म्याक एप्पल: विशेषताहरु र समीक्षा
घर को लागि एक ल्यापटप के किन्न? प्रमुख चयन मापदण्ड
कसरी वाईफाई संग एक ल्यापटप इन्टरनेट वितरण गर्न?
डेल Inspiron M5110 नोटबुक: प्राविधिक विनिर्देशों, समीक्षा, समीक्षा
Bavarian क्रीम संग केक: चरण नुस्खा द्वारा एक कदम
लोक उपचारको साथ प्रोस्टेटाइट कसरी उपचार गरिन्छ।
एक व्यापार योजना स्टोर निर्माण गर्न कसरी